Tranokala sary 5 misy efamira vonona alaina | Famoronana an-tserasera
Loharano sary an-kianja: Sary hosodoko sy mpanakanto
Azo antoka fa tamin'ny fahazazanao dia tianao ny manao sary an-tsipika ao anaty kahie (matetika amin'ny matematika iray, izay ilay iray misy efamira). Angamba izao hanao izany ny zanakao. Fa, Fantatrao ve fa misy ny kisarisary sary alaina?
Raha liana te hianatra momba an'ity haitao sary ity ianao, ary indraindray mahazo sary an-tsokosoko alefanao, manome safidy vitsivitsy ianao hampidirana azy ireo ary, araraoty, hamoaka ilay zavakanto entinao ao anatiny.
1 Inona avy ireo sary an-tsary
2 Fomba fanaovana sary kisarisary
3 Aiza no hananana sary an-tsarimihetsika vonona hampidina
3.1 Tranokalan'ny mpampianatra
3.4 Fitaovana ho an'ny mpampianatra
3.5 Mpanonta sary
Inona avy ireo sary an-tsary
Ny sary mifono vy, izay fantatra ihany koa amin'ny sary an-tsary, dia a teknika handika marimarina kokoa raha mitazona ny refy marina, sary. Amin'izany fomba izany dia azonao fantarina tsara hoe inona ny refin'ny sary ary adikao mora foana izany.
Na dia imbetsaka aza isika dia mamantatra sary an-tsary miaraka amin'ireo ankizy, ary izy ireo no tena mampiasa azy io (indrindra satria mazoto manao sary anaty kahie izy ireo), ny tena izy dia fantatry ny matihanina io teknika io ary ampihariny amin'ireo sary sy sary namboarin'izy ireo izany.
Raha ny marina dia tsy misy farafahakeliny ny haben'ny sary hosodoko, azo atao lehibe kokoa na kely kokoa izy ireo, miankina amin'ny sary izay hatao.
Ny tanjon'ity teknika ity dia, tsy isalasalana, ny hifantoka amin'ny kianja tsirairay avy, amin'ny fomba tsy maintsy hamenoanao tsirairay azy ireo tsikelikely, maka tahaka ny tany am-boalohany, ary, noho izany, hanao klone tonga lafatra ianao ny sary.
Fomba fanaovana sary kisarisary
Alohan'ny hanomezana anao ny kisarisary hisintomana, tianay ho fantatrao fa afaka mamorona endrika anao manokana ianao. Ho an'ity, ny zavatra tokana ianao no mila dia: mpanapaka, famafana, sary handika, taratasy, pensilihazo. Ho an'ny fandokoana dia azonao atao koa ny mampiasa loko, marika, sns.
Raha vantany vao manana ny zava-drehetra ianao, dia tonga ny fotoana hiasana:
Safidio ny sary alaina tahaka. Mety ho sary izany fa ny marina dia miankina amin'ny haben'ny fahasarotana tianao hampiharina izany.
Safidio ny karazana taratasy izay hiasanao. Tsy voatery ho ravin-taratasy izy io, mety ho baoritra, taratasy matevina sns.
Manaova sarisary eo ambonin'ilay sary tany am-boalohany. Mitandrema, handoko ny sary tany am-boalohany isika, noho izany, raha tsy tianao hihaosa dia tsara kokoa ny manaova kopia ary ataovy eo amboniny. Ny halavirana eo anelanelan'ny zana-kazo dia ho voamarinao. Raha sary misy antsipiriany be dia be, ny akaiky kokoa ny tsipika dia tsara kokoa, satria tsy ho kely ny hamenoana ny frame tsirairay ary sarotra kokoa ny manao lesoka, saingy mila asa bebe kokoa ianao, ary indraindray afaka manao izany ravao ny faharetanao. Miezaha hametraka ny tsipika rehetra amin'ny halavirana mitovy.
Isao ny boaty tsirairay. Samy isaky ny tsanganana ary isaky ny andalana. Ny sasany izay ataony dia manome isa ny kianja tsirairay, amin'ny fomba izay fantany isaky ny teboka ny zavatra tokony hapetrany.
Manaova efamira mitovy amin'ny takelaka banga. Mila "mamantatra" ilay takelaka nataonao teo aloha teo amin'ny lambanao ianao. Ny tiana hambara dia ny fampiasana an'io maodely io hamaritana izay tokony hosoratanao isaky ny boaty. Eto no ahafahanao mieritreritra ny hanao ilay sary vaovao ho lehibe na ho kely kokoa. Raha te hanitatra na hampihena ny sary ianao dia tsy maintsy mizara an'io fandrefesana io amin'ny isan'ny sela hanananao ireo refy vaovao. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mbola mila manana sela mitovy ianao, saingy ho lehibe kokoa na kely kokoa ireo. Andramo ny tsy manenjana be loatra satria tsy maintsy tadidinao fa tsy maintsy hamafana io takelaka io.
Atombohy ny fandokoana. Mifantoha amin'ny boaty tsirairay, ary atombohy hosodoko izay hitanao ao amin'io kianja io. Io dia ahafahanao mifantoka amin'ny sary iray monja (manala ny ao ambadika) na mandika ny zava-drehetra. Mahareta amin'ny fanaovana azy, indraindray vao mainka mafy ny sary tany am-boalohany, vao mainka maharitra ela kokoa ny famerenana azy.
Vantany vao vita, hamafa ny takelaka. Ankehitriny dia mila mandoko fotsiny ianao (na avelao amin'ny mainty sy fotsy).
Aiza no hananana sary an-tsarimihetsika vonona hampidina
Loharano: Orientation Andujar
Raha aorian'ny zavatra hitanao Te hanana sary an-kianja aho, homena anao ireo pejin-tranonkala izay ahitanao azy ireo ary alaina maimaim-poana izany. Ho hitanao amin'ny fahasahiranana samihafa izy ireo, manomboka amin'ny tsotra indrindra, mety indrindra ho an'ny ankizy, fa koa hanombohana, ka hatrany amin'ireo sarotra kokoa, ho an'ireo mandroso indrindra sy manana traikefa ihany.
Ao amin'ity tranokala ity dia misy lahatsoratra roa (raha ny tena izy vitsivitsy kokoa) izay manana sary mifampitohy vonona hisintona, nataon'i Lola Angulo Torralbo, mpampianatra momba ny fahazazana sy ny fanabeazana fototra.
Mety amin'ny kely indrindra amin'ny trano àry izy ireo. Na dia izany aza, azonao atao ihany koa ny mieritreritra ny hanao izany raha tsy manana traikefa amin'ity teknika ity ianao ary maniry ny hamakivaky ireo fotony ary avy eo mandroso amin'ny sary sarotra kokoa.
Amin'ny Pinterest ianao dia ho afaka mahita sary an-tsary maro. Matetika ireo sary ireo Entiny mankany amin'ny pejy ahafahanao misintona misimisy kokoa ianao. Fa raha tsy izany dia tsy maintsy mampidina ny sary avy amin'ity tambajotra sosialy ity ihany ianao ary manonta azy ireo.
Raha ny marina dia eto no hahitanao ny ankamaroany, ny ankamaroan'izy ireo dia vita amin'ny taratasy grafika avy amin'ny kahie. Ary mifantoka amin'ny ankizy, na dia misy aza ny sasany somary sarotra kokoa.
Safidy iray hafa ny fampiasana ny motera fikarohana sary Google. Mametraka ao anaty browser "Kisary grid" na "sary an-tsary" Hahita safidy maromaro ianao handika ny solo-sainanao sy hanonta.
Fitaovana ho an'ny mpampianatra
Tranonkala iray hafa ahafahanao misintona sary kisarisary isan-karazany, indrindra mifantoka amin'ny akaninjaza sy ny ambaratonga voalohany. Ankehitriny, misy ny sasany, noho ny habeny sy ny antsipiriany, dia natao ho an'ny mandroso kokoa, ary afaka manampy anao handray ny dingana mankany amin'ireo sarotra kokoa.
Raha efa manana traikefa amin'ny sary ianao dia afaka mankany amin'ny ambaratonga manaraka. Ary izy io dia ny maka sary tianao ary manamboatra takelaka handika azy io. Mba hanaovana izany, ny sisa hataonao dia ny manonta azy ary mametraka ny sela amin'ny tanana.
Fa afaka mampiasa koa ianao programa fanovana sary hametrahana azy ho azy.
Araka ny hitanao, ny fitadiavana sary an-kianja, indrindra ho an'ny ankizy, dia tena mora ary manana safidy maro ianao. Saingy azonao atao koa ny manao azy amin'ny sary rehetra anananao, mila mamorona takelaka fotsiny ianao ary mandika azy amin'ny lamba vaovao na ravina. Sahinao ve ity teknika ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Tranokala sary 5 misy efamira vonona alaina
Ireo pejy 9 tsara indrindra hanovana sary amin'ny Internet